Waxaan tijaabada u saarnay Kiiskii Dahabka ee Ballistic | Wararka IPhone
Dib u eegid: Waxaan tijaabada u saarnay Kiiskii Dahabka ee Ballistic
Pablo Ortega | | Qalabka IPhone, iPhone
Intii lagu jiray maalmihii ugu dambeeyay waxaan fursad u helnay inaan kiiska tijaabinno Jeweliste Balaastik, hal kiiska in kaliya ma aha ku darayaa style in aad iPhone, sidoo kale waxay kaa ilaalinaysaa dhicitaanka ugu badan. Shakhsi ahaan, anigu ma jecli kiisaska, tan iyo markii ay ka qaadayaan naqshaddii asalka ahayd ee iPhone, laakiin waa run in mararka qaarkood ay lagama maarmaan noqdaan in laga ilaaliyo terminal-ka xiriirka furayaasha jeebka ama dhaca. Haddii aad ila wadaagto ra'yi, markaa waa inaad fiirisaa bedelkan.
Jewel waa kiis hufan, sidaasna ku ilaalineysa naqshadda iPhone 5 ama iPhone 5s inta aad ku dareysid walxaha asalka ah. Qaybta hore waxay banaanka soo dhigeysaa shaashadda taleefankaaga, halka qeybta dambe ay u taagan tahay dhibcaha ku hareeraysan astaanta tufaaxa qaniinay. Waxa ugu fiican ee ku saabsan qaabeynta hufan ayaa ah inay muujineyso qaabka iPhone-kaaga. Moodel madow ayaa sidoo kale la heli karaa.
Geesaha wareegsan ayaa istaaga, oo loogu talagalay in laga ilaaliyo shaashadda dillaacyada suurtagalka ah ee ay sababaan dhicitaanka. Daboolka si dhib leh ayuu ku daraa dhumucda taleefankaaga, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon marka aad rabto inaad ku qaadatid iPhone-gaaga jeebkaaga surwaalka ah. Lakabkaan difaaca ayaa ka caawinaya ka hortagga kuuskuusyada iyo xagashada xagjirnimada dusha sare.
Iyo kuwa aan jeclayn daboolida ay adagtahay in laga saaro oo la xidho, waxaan rajeyneynaa in tani aysan ku dhici doonin daboolka Jeweliste Balaastik, taas oo ay fududahay in laga saaro oo la geliyo ilbiriqsiyo gudahood.
Dhammaan badhamadu way fududahay in la riixo mana xirna headphone-ka iyo xeedho danabka.
Jeweliste Balaastik waxaa laga heli karaa shirkadda dukaanka internetka ugu yar $ 20.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Dib u eegid: Waxaan tijaabada u saarnay Kiiskii Dahabka ee Ballistic
gudaha Mexico waxaad ka heli kartaa daboolida ballistic-ga gudaha http://www.TODOparaSMARTPHONES.com
Bose waxay dacweysaa Beats oo ku xadgudubta shatiyada baajinta shatiga
Telefoonka Amazon Fire waa sida iPhone 4 gudaha ah